Soo dejisan Seaside Multi Skype Launcher 1.21 – Vessoft
Isgaarsiinta Voice, Webcams
Soo dejisan Seaside Multi Skype Launcher
Badda Multi Skype Launcher – software ah in ay isku mar bilaabaan xisaab badan Skype on computer hal. Badda Multi Skype Launcher u saamaxaaya in ay ku darto xisaab badan Skype, iyaga oo u arkaan in liiska guud ee software-ka iyo ordi account tarin. Marka aad bilowdo Skype ah, xaaladda account lagu soo bandhigi doonaa saxaarad nidaamka. Badda Multi Skype Launcher taageertaa autorun xisaabaadka dhamaan galo nidaamka lagu jiro. Sidoo kale software ah u saamaxaaya in ay ku haysay mid ka account ka Microsoft, qofkuna diiwaanada kale ee Skype.
Orod oo ka mid ah xisaabaha kala duwan Skype
Muujiya la xisaabay in liiska guud ee software-ka
Orod of account ka Microsoft
Taageerada xisaabaadka autorun
Comments on Seaside Multi Skype Launcher:
Seaside Multi Skype Launcher Software la xiriira:
Webcams Isgaarsiinta Voice Tool si ay ula xiriiraan dadka isticmaala oo dunida ah. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u sameyso wicitaano cod iyo xiriiro hab ka mid ah muuqaal.
العربية, English, Українська, Français... Viber 6.1.1.2
TeamSpeak 3.0.19.4 Client iyo 3.0.13.4 Server
Isgaarsiinta Voice Qalab ku haboon isgaarsiinta codka internet-ka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan ama astaysto aad server u gaar ah iyo in la siiyo xuquuqda Moderators.
العربية, English, Українська, Français... Clownfish for Skype 4.32 Standard iyo Portable
Isgaarsiinta Voice Webcams software The inuu turjumo farriimaha soo socda iyo xilka ee Skype. software The taageertaa adeegyada caanka ah ee turjumaad la tiro badan oo ka mid ah luqadaha.
العربية, English, Українська, Français... Mumble 1.2.12
Isgaarsiinta Voice Qalab Functional isgaarsiinta codka. Software ayaa si toos ah u kordhiyaa nimadu codka iyo buuq ka saaraan, bixinta tayada fiican ee isgaarsiinta.
Magic Camera 8.8.5
Webcams software ee processing video socodka saamaynta kala duwan muuqaalka iyo filtarrada badalo. software The falgala inta badan ee adeegyada isgaadhsiinta ee video ah.
English, Français, Español, Deutsch... TomTom Home 2.9.8.3568
Maps Tool si loo xakameeyo qalabka GPS-navigation horumariyo by TomTom. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u xakameeyaan nidaamka navigation ah oo marin u ah in ay ka kooban qalab iyo.
English, Français, Español, Deutsch... Wireshark 2.2.1 Standard iyo Portable
Imtixaanka Network Qalab ayaa waxa u ku imtixaamaa xiriir network iyo codsiyada. Software soo bandhigayaa warbixin ku faahfaahsan oo ku saabsan hab maamuuska ee heerarka kala duwan.
English, Українська, Français, Español... Spotflux 3.1.0.158
Waxbarashada Software ah in carruurta la baro mabaadii'da aasaasiga ah ee barnaamijyada. Software wuxuu isticmaalaa interface la fududeeyey ee horumarka haboon mashaariic kala duwan.